Xildhibaanadii dhawaan sameystay Kutlada oo kala fur fur lagu bilaabay |
Xildhibaanadii dhawaan sameystay Kutlada oo kala fur fur lagu bilaabay
Iyadoo bishaan horaanteeda magaalada Muqdisho looga dhawaaqay Kutlad ay ku mideysan yihiin Xildhibaanada qaarkood isla markaana loogu magacadaray Golaha Badbaadin Qaranka ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay dib u celiyaan xukuumadii uu soo dhisay R/wasaare Cumar.
Tan iyo markii uu la laabtay xukuumadiisa R/wasaare Cumar ayaa waxaa socotay qorshe lagu kala furfurayo Xildhibaanada sameystay Kutlada sameystay si xukuumada lasoo wado ay Baarlamaanka kalsoonida ugu hesho.
M/weynaha ayaa u adeegsaday kala furfurida Kutladaan xubno ka tirsan Xildhibaanada ,qaarka tirsanaa Wasiiradii dib loola laabtay magacyadooda iyo xubno kala oo xariif ku ah kala furfurida Xildhibaanda midaysan.
War aan helnay ayaa waxa uu sheegayaa in hadda tiro gaareysay 30-Xildhibaan laga soo furtay dhanka Kutlada Golaha Badbaadin Qaranka ,waxaana lagu qiyaasayaa in hadda ay hareen tiro lagu qiyaasay 70-Xildhibaan, waxaana taasi cadeyn u ahwarqadii shalay ay soo qoreen Xildhibaanda Kutladaas ku jira.
Ka hor inta aan la gaarin xilliga loo qabtay xukuumada ayuu M/weyna doonayaa in la burburiyo Kutladaan isla markana qaarka mid ah Xildhibaanadii kasoo go’ay halkaas ay la hadlaan Warbaahinta iyaga oo sheegaya inay burburtay Kutlada.
Si kastaba qarashaad badan ayaa ku baxay kala fur furista Kutladaan maadaama ay caqabad ku noqdeen in Baarlamaanka laga gudbiyo xukuumada cusub.